Xitaa Wiilasha Waaweyn waxay iloobaan Isticmaalka! | Martech Zone
Xitaa Wiilasha Waaweyn waxay iloobaan Isticmaalka!
Waxaan rabay inaan qoro qoraal gaaban oo ku saabsan qaar ka mid ah arrimaha isticmaalka jahwareerka ee aan ku arkay dhowr arji.
Sida laga soo xigtay Wikipedia, isdhexgalka aadanaha-kumbuyuutarka iyo sayniska kombiyuutarka, isticmaalka badanaa wuxuu loola jeedaa xarrago iyo hufnaan la dhaqanka isdhexgalka barnaamijka kombiyuutarka ama degel websaydh ah.
Midka ugu horreeya ee aan bixin doono runti waa arrin Isticmaal oo leh Bogga hoyga Google. Haddii aad ku darto qeybta Google Reader bogga hoyga Google, si fiican ayuu u shaqeeyaa. Waxaa jira; si kastaba ha noqotee, hal arrin soo jiidasho leh: 'calaamadda dhammaantood waa la akhriyay' xiriiriye wuxuu si toos ah uga hooseeyaa iskuxirka si uu u furmo Google Reader.
Marar dhawr jeer hadda, waxaan dhagsiiyey xiriirin khaldan oo dhammaan quudintaydu waxay si toos ah u aadeen xaalad la aqriyay. Tani waa adeegsi xun. Waxaan ku dhiirigalin lahaa Google inay ka dhaqaajiso xiriiriyahan FAR meel kasta oo xiriiriyeyaal ah.
Tusaalaha labaadna waa Dardargelinta Microsoft, halkaasoo badhanka Tirtirida e-mayl si toos ah ugu xiga badhanka Junk Email. Microsoft Entourage waxay lamid tahay Muuqaalka 'OSX', laakiin ma lahan wax xulashooyin ah oo ay badhanka u wareejiso. Natiija ahaan, waxaan si qalad ah ugu daray emayl sax ah faylkayga Junk Email. Si aan taas uga laabto, waa inaan ka laabto wixii xeer ah ee Junk Email ah, ka helo emaylka galka Junk Email-kayga, ka dibna aan dib ugu celiyo sanduuqgeyga. Arrgh!
Waxaan ahay mid ka mid ah ragga jecel inay abaabulaan oo ka dhigaan wax walba oo ku jira arjiga. Waxaan rumeysanahay in labadan kuwanba ay yihiin tusaalayaal halka abaabulidda qaybaha ay macno u sameeyeen - laakiin aan ahayn qaab ahaan. Waxaa muhiim ah in la fahmo sida adeegsadayaashu dhab ahaan u adeegsanayaan dalabkaaga si aad u joojin karto khaladaadka ku talagal ah adigoo u maraya qaabka liita.
Ka soo horjeed tan WordPress, oo qabta shaqo cajiib ah oo kala soocida qaybaha aan wadajirka ahayn. U fiirso Badbaadi oo sii wad Tafatirka iyo Save badhamada kore (oo ah salka foomka boostada) iyo kan Tirtir Qoraalkan badhanka aad uga hooseysa dhinaca bidix… fog, aadna uga fog midba midka kale.
Shaqo weyn, WordPress!
Miyaad haysaa tusaalooyin arrimo aad u xun oo Isticmaal ah oo ku saabsan codsiyada aad isticmaasho?
Keen Quudintaada Akhristaha Google ee aad ugu jeceshahay Technorati
Ma Jiro Dhalasho Fiican! 500 Akhriste Quudin!
Apr 18, 2007 at 12: 37 AM
xaqiiqo yar oo la yaqaan: Anigu waxaan ahay sababta badhanka tirtirku isu beddelo casaan.
maxaa yeelay ma aqaano sida loo akhriyo farqiga u dhexeeya tirtirka iyo keydinta 🙁
Apr 18, 2007 at 3: 14 PM
Ama cawl madow oo loogu talagalay dadkaas indha la'aanta ah. 😉
Apr 18, 2007 at 9: 52 AM
Xaqiiqdii, haddii aad adeegsato adeegga martigelinta bilaashka ah ee 'WordPress' ee IE7 oo aad isku daydo inaad ballaadhiso qaybta '' Xulashada Ikhtiyaariga ah '', si buuxda uma sii ballaadhin. Tani waxay noqon kartaa cilad ka badan dhibaatada isticmaalka, laakiin marnaba ka yarayn, waxay noqon kartaa wax laga xumaado.
Apr 18, 2007 at 10: 57 AM
Wax kasta oo ku yaal myspace.
Wes, kan ayaa iga dhigay qufac iyo qosol dheer. Xaqiiqdii waad saxantahay!